Xarunta Waxbarashada ee Forex | FXCC
WARBIXIN KU SAABSAN ARRIMAHA SHAQADA
Markaad bilowdo safarkaaga ganacsiga, waa muhiim in la barto
oo leh faa'iidooyinka ganacsiga ECN, waxaanan halkan u joognaa inaan ku caawino.
Maxaad ubaahan tahay inaad ogaatid marka aad ganacsi u gadatay
Raadi aasaasahaan aasaasiga ah ee forex iyo adigana awood u yeelatid sidii aad u gelin lahayd xirfadaha aqoonta leh
Baro sababta ay tahay ECN waa mustaqbalka Suuqa Sarrifka Dibadda.
Waa maxay farqiga u dhaxeeya labada moodeel iyo faa'iidooyinka ECN keena ganacsatada?
Lammaanaha Aasaasiga ah
Kala baro dhaqdhaqaaqyada asaasiga ah iyo astaamaha.
Fahamka isbedelka waa muhiim in la xisaabiyo xisaabtaada saxda ah.
Baro goorta goosashadu dhacayso iyo sida ay u saameyn karto ganacsiga.
Maxay muhiim u tahay in si buuxda loo fahmo fikirka margin marka ganacsiga loo dhoofiyo?
Baro sida loo guuleysto ganacsiga FXCC iyo in aan fahanno alaabtayada.
Waxbarashada eBooks ee Waxbarashada
Hagaajinta ganacsigaaga adoo dooranaya ebooks forex, siinta hagista iyo fahamka fikradaha muhiimka ah ee ganacsiga
FADLAN dhamaanba eBOOKS
Furo BILAASH LACAG LA'AAN AH Maanta! Ku bilaw ganacsiga adoo kudhex gareeyey dhinacaaga!
Ganacsiga Forex waa khatar.
Waxaa dhici karta inaad lumiso dhamaanba raasumaalkaaga maalgashiga ah.
Waa maxay suuqa? La soco dhacdooyinka dhaqaale ee caalamiga ah ee saameeya dhaqdhaqaaqa suuqa.
Qadar badan oo loo maro ayaa loo adeegsadey xarunta waxbarashada ee forex
si loo hubiyo in ay leedahay dhibco kala duwan oo kor u qaadaysa macaamiisheena aqoonta.
Aasaasiga Forex Falanqaynta Forex Istaraatiijiyada Xawaaladda
Waxaan bixinnaa falanqayn gaar ah iyo maqaalo xiiso leh, oo daboolaya mawduucyada mowduuca oo dhan.
Casharrada Ganacsi ee Forex
bilowga ah Dhexdhexaad
Casharrada FXCC waxay ka koobanyihiin qaar ka mid ah dariiqooyinka lagama maarmaanka u ah marka la rabo in la sameeyo ganacsade guuleysta.
Baro luqadda Forex oo leh ereyga falsafadda ee FXCC.
Ka jawaab su'aalaha badanaaba la isweydiiyo ee ku saabsan qaabka ganacsiga ama ganacsiga guud ahaan.
GO TO SOOKS